Kukwidziridzwa kweApple Arcade pawebhusaiti yeApple | Ndinobva mac
Iyo Apple Arcade kusimudzira pane Apple webhusaiti
Kwemavhiki mashoma tanga tichiona kuwedzera kwekushambadzirwa nezve inoyerera mutambo webasa kubva kuApple, Apple Arcade. Zvine musoro, kushambadzira uku kunowedzera iyo nguva iwe yaunowana yepamutemo webhusaiti yekambani.
Kwemwedzi mishoma, vashandisi vazhinji vakaita kuti basa rekubheja riitwe nekutengwa kweMac, iPhone, iPad kana zvimwewo Apple zvishandiso. Mupfungwa iyi vazhinji vacho vari kunakidzwa yemahara apuro mitambo kwemwedzi x, asi pane vanhu chaivo vanobhadhara iyi mitambo?
Ichokwadi kuti iyo Cupertino firm iri kuita kuti mimwe mitambo iwanikwe papuratifomu uye mazuva mashoma apfuura vakawedzera nezve 180 mamwe mazita. Tinogona kuva nechokwadi chekuti mimwe yemitambo iyi haisi yekufarirwa nevazhinji vedu asi mimwe inonakidza senge: Matatu, Muchero Ninja, Cheka Tambo, NBA 2K21 Arcade Edition, Star Trek: Ngano, nezvimwe. Kushambadzira kweApple kuri pachena:
MuApple Arcade mune mitambo yezvese zvido: huropi chai, mashiripiti adventures, marudzi asingagumi, epic mitambo, makuru echinyakare uye zvimwe zvakawanda. Dzidzo uye nhau dzinosvika vhiki imwe neimwe. Saka gadzirira kunakidzwa nemitambo yaunoda pasina miganho kana zvinokanganisa.
Pakupedzisira, ndezvekusimudzira sevhisi yekutamba sevhisi uye kune izvi vanofanirwa kuwedzera iwo mazita isu atinogona uve nenguva yakanaka uchitamba kana kungoti sevamwe vanoti "kuuraya nguva" yatinoenda nekutakura kwevanhu kana zvimwe zvakadaro. Kusvika pari zvino paive nemimwe mishoma yemitambo iyi asi zvinoita sekunge vari kuiswa zvishoma uye vanokodzera mukana. ¿Wakatoyedza mitambo yeApple Arcade?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Mitambo » Iyo Apple Arcade kusimudzira pane Apple webhusaiti
Pwn2Own 2021 anokwikwidza anokunda $ 100.000 yekubiridzira Safari
Kufananidza Bhokisi Rekushandisa rinosvika pane shanduro 4.5 ichiita kuti ienderane neM1 processor